လက်ဖ၀ါးကလက္ခဏာမှာ အညွှန့်ပါတယ်၊ ထီးရိုးပါတယ်ဆိုတာဘာလဲ… – Trend.com.mm
လက်ဖ၀ါးကလက္ခဏာမှာ အညွှန့်ပါတယ်၊ ထီးရိုးပါတယ်ဆိုတာဘာလဲ…
Posted on November 2, 2018 November 2, 2018 by Shun Lei Phyo
တစ်ချို့သူတွေကတော့သိပြီးသားဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ လက္ခဏာမှာ ထီးရိုးပါတယ် အညွှန့်ပါတယ်လို့ ပြောတတ်ကြပါတယ်။ လက္ခဏာဆိုတာလည်း တစ်ချို့သောသူတွေအတွက်ယုံတမ်းမဟုတ်တဲ့အယူအဆတစ်ခုပါပဲ။ ဆိုတော့ ရှေးလူကြီးတွေပြောစကားအရနဲ့ တတ်သိနားလည်သူတွေရဲ့ဟောပြောချက်အများစုအရာ ဒီလို လက္ခဏာမှာထီးရိုးပါတဲ့ သူ အညွှန့်ပါတဲ့သူက ဘာတွေများ ထူးခြားတဲ့သူဖြစ်နိုင်လဲ…ဘယ်လိုဇာတာရှင်မျိုးလဲပေါ့….
ဒီလိုလက္ခဏာပိုင်ရှင်တွေက သူများထက်ထူးမထူးရင်ရူးဆိုတဲ့ ဇာတာရှင်မျိုးပါ။ ဘယ်နေရာမှာမဆို ကိုယ်လုပ်ကိုင်တဲ့အရာတွေက စွမ်းစွမ်းတမံ အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်သွားသွားလည်းလူချစ်လူခင်ပေါများသလို လူအများစု လူထုရဲ့ခေါင်ဆောင်(သို့)လူ့သားအကျိုးအများဆုံးဆောင်ရွက်နိုင်သူမျိုးတွေပါ။ ထူးခြားပြီးထွန်းတောက်လွန်းတာမျိုး ဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်ရင် ရှုံးနိမ့်မှုအကြီးကျယ်ခံစားရတတ်သူတွေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ရှေးလူကြီးတွေပြောစကားပေါ့နော်။ ဒီလိုဇာတာရှင်မျိုးတွေကသူများထက်ပိုပြီးဘုရား တရားမြဲရပါတယ်။ ဘယ်ဘာသာပဲကိုးကွယ်ကိုးကွယ်ကိုယ်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာအပေါ် ယုံကြည်ကိုးစားမှုအားအလွန်ကောင်းမွန်သင့်ပါတယ်။ ဒီလို ဘုရားတရားမြဲလေ ဒီလူတွေကအထွတ်အထိပ်ကိုရောက်လေပဲလို့ပြောစမှတ်ပြုကြပါတယ်။
တဈခြို့သူတှကေတော့သိပွီးသားဖွဈမယျထငျပါတယျ။ လက်ခဏာမှာ ထီးရိုးပါတယျ အညှနျ့ပါတယျလို့ ပွောတတျကွပါတယျ။ လက်ခဏာဆိုတာလညျး တဈခြို့သောသူတှအေတှကျယုံတမျးမဟုတျတဲ့အယူအဆတဈခုပါပဲ။ ဆိုတော့ ရှေးလူကွီးတှပွေောစကားအရနဲ့ တတျသိနားလညျသူတှရေဲ့ဟောပွောခကျြအမြားစုအရာ ဒီလို လက်ခဏာမှာထီးရိုးပါတဲ့ သူ အညှနျ့ပါတဲ့သူက ဘာတှမြေား ထူးခွားတဲ့သူဖွဈနိုငျလဲ…ဘယျလိုဇာတာရှငျမြိုးလဲပေါ့….
ဒီလိုလက်ခဏာပိုငျရှငျတှကေ သူမြားထကျထူးမထူးရငျရူးဆိုတဲ့ ဇာတာရှငျမြိုးပါ။ ဘယျနရောမှာမဆို ကိုယျလုပျကိုငျတဲ့အရာတှကေ စှမျးစှမျးတမံ အောငျမွငျနိုငျပါတယျ။ ဘယျသှားသှားလညျးလူခဈြလူခငျပေါမြားသလို လူအမြားစု လူထုရဲ့ခေါငျဆောငျ(သို့)လူ့သားအကြိုးအမြားဆုံးဆောငျရှကျနိုငျသူမြိုးတှပေါ။ ထူးခွားပွီးထှနျးတောကျလှနျးတာမြိုး ဖွဈရငျဖွဈမဖွဈရငျ ရှုံးနိမျ့မှုအကွီးကယျြခံစားရတတျသူတှလေညျးဖွဈကောငျးဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဒါကတော့ ရှေးလူကွီးတှပွေောစကားပေါ့နျော။ ဒီလိုဇာတာရှငျမြိုးတှကေသူမြားထကျပိုပွီးဘုရား တရားမွဲရပါတယျ။ ဘယျဘာသာပဲကိုးကှယျကိုးကှယျကိုယျကိုးကှယျတဲ့ဘာသာအပျေါ ယုံကွညျကိုးစားမှုအားအလှနျကောငျးမှနျသငျ့ပါတယျ။ ဒီလို ဘုရားတရားမွဲလေ ဒီလူတှကေအထှတျအထိပျကိုရောကျလပေဲလို့ပွောစမှတျပွုကွပါတယျ။